नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला ? - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
24 December, 2020 7:57 am
काठमाडौं । पार्टीका दुई खेमा अलग्गिएसँगै जनमानसमा एउटा जिज्ञासा व्याप्त छ– नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला ? विज्ञहरू यसका तीनवटै सम्भावनाबारे मत राख्छन्–
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको राय पनि उस्तै छ। ‘सदस्य को–को हुन्, त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यसपछि कुन समूहमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ’, उनले भने। उनका अनुसार कसलाई आधिकारिकता दिने भन्दा पहिला उनीहरूले पेस गरेका प्रमाण, विगतका नजिर, विगतका सर्वसम्मत निर्णयजस्ता आधार हेरिनुपर्छ। ‘कहिले विवाद उठ्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। दुवै पक्षलाई आफ्ना तथ्य प्रमाण पेस गर्न सूचित गर्नुपर्छ। दुवै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ। सहमति नभए ठोस आधार प्रमाण माग्नुपर्छ। ठोस प्रमाण आधार पुगेकालाई आधिकारिता दिनुपर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।